China SPC ကြမ်းခင်းစာရွက် / နံရံအလှဆင်စာရွက် Extrusion Line ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |Jiahao
အမြှေးပါး EXTRUDER နှစ်လုံး
PVC Soft Sheet EXTRUSION လိုင်း
PVC Transparent Sheet EXTRUSION လိုင်း
PVC RIGID Core စာရွက် EXTRUSION လိုင်း
PVC အလှဆင်စာရွက် EXTRUSION လိုင်း
WPC PVC FOAM လိုင်း
PVC AVERTISING ပြကွက် / FOAM CORE / အခမဲ့ FOAM ဘုတ်လိုင်း
PVC WPC ရေချိုးခန်းပရိဘောဂဘုတ်လိုင်း
WPC Cabinet ပရိဘောဂဘုတ်လိုင်း
ဆောက်လုပ်ရေး Templet board / Shuttering board လိုင်း
SPC ကြမ်းပြင်/PVC ဗီနိုင်ကြမ်းခင်း/PVC ကြမ်းပြင် ပျဉ်
SPC ကြမ်းပြင်စာရွက်/နံရံအလှဆင်စာရွက် EXTRUSION လိုင်း
LVT ကြမ်းပြင် EXTRUSION လိုင်း
SPC SKIRTING ကိုယ်ရေးအကျဉ်းများ လိုင်း
PE/PP/PVC- WPC ကြမ်းပြင်/အပြင်အဆင် ပရောဂျက်
WPC HOLLOW တံခါးအကန့်
UPVC ပြတင်းပေါက် / တံခါးပရိုဖိုင်များ / တံခါး panel
Acrylic Sheet/PMMA စာရွက်လိုင်း
SPC ကြမ်းခင်းစာရွက်/Wall Decoration Sheet Extrusion Line
SPC ကြမ်းခင်းစာရွက်သည် အပိုအလွှာ ၂ ခုပါသည့် PVC core စာရွက်ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည်။နေရာအမျိုးမျိုးအတွက် ကြမ်းခင်းပစ္စည်းများအဖြစ် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုကြသည်။
ဤစာရွက်သည် ပြသမှုတွင် ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပေးမည့် နံရံအလှဆင်အကန့်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
အမျိုးမျိုးသော ပုံစံဒီဇိုင်းဖြင့်၊ ဤစာရွက်သည် သာမန်အလှဆင်စက္ကူနှင့် စာရွက်ထက် ပိုကောင်းနိုင်ပြီး ခြစ်ရာကိုဆန့်ကျင်ရန် အလွှာတစ်ခုရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၎င်းသည် နံရံအကန့်အတွက် ကြာရှည်ခံပစ္စည်းဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် ဤအပလီကေးရှင်းအတွက် တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မကြာမီကာလအတွင်းတွင် ရေပန်းစားလာမည်ဖြစ်သည်။
စာရွက်အထူ 970-1350mm၊ အထူ 2-8mm
စွမ်းရည်: 1200 ကီလိုဂရမ် / နာရီ
စက်အရှည် 35 မီတာ
Extruder အမျိုးအစား : အမြွှာ conical
မော်တာပါဝါ: 200 kw
SPC FLOORING SHEET Extrusion line သည် ကြမ်းခင်းရည်ရွယ်ချက်အတွက် အရည်အချင်းပြည့်မီသော စာရွက်ကို ဖန်တီးနိုင်ရုံသာမက နံရံအလှဆင်ခြင်းအတွက် ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ပေးစွမ်းနိုင်သော နံရံကပ်အကာအခင်းပြုလုပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး မတူညီသောနေရာများနှင့် စတိုင်လ်များအတွက် အသုံးချနိုင်ပါသည်။
spc အခြေခံစာရွက်အတွက် ပြီးပြည့်စုံသော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်၊ ဤလိုင်းသည် ရုပ်ရှင်အားလုံးကို အွန်လိုင်းတွင် အလှဆင်နိုင်ပြီး မြင့်မားသောအလုပ်ထိရောက်မှုကို ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။
အထွက်စာရွက်အရွယ်အစား0.8-2.5mm၊ အကျယ် 1220mm-1800mm
စွမ်းဆောင်ရည်280-500 ကီလိုဂရမ် / နာရီ
1. စိမ်းလန်းသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး၊ ဖော်မယ်လ်ဒီဟိုက်မရှိ၊ အဆိပ်အတောက်မရှိ၊ အန္တရာယ်မရှိ၊ ရေဒီယိုသတ္တိကြွ ညစ်ညမ်းမှု မရှိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှု မရှိစေဘဲ၊ စိမ်းလန်းသော သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်ရေး ထုတ်ကုန်များနှင့် သက်ဆိုင်သည်၊ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
2. အလွန်ဝတ်ဆင်မှုခံနိုင်ရည်- PVC ကြမ်းပြင်မျက်နှာပြင်တွင် အလွန်ဝတ်ဆင်ခံနိုင်ရည်ရှိသော နည်းပညာမြင့်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အထူးဖောက်ထွင်းခံနိုင်ရည်ရှိသော အလွှာတစ်ခုပါရှိသည်။ထို့ကြောင့် PVC ကြမ်းခင်းသည် ဆေးရုံများ၊ ကျောင်းများ၊ ရုံးခန်းများ၊ စျေးဝယ်စင်တာများ၊ စူပါမားကတ်များ၊ မော်တော်ယဉ်များနှင့် အခြားနေရာများတွင် လူအများအပြား သွားလာမှုများပြားသောနေရာများတွင် ပိုမိုရေပန်းစားလာပါသည်။
3. ရေစိုခံနိုင်ခြင်း၊ အစိုဓာတ်ခံနိုင်ခြင်း၊ ရေစိုခြင်းတွင် ပုံပျက်မသွားခြင်း၊ လမ်းချော်ခြင်း PVC ပစ္စည်း၊ ခိုင်ခံ့သော လမ်းချော်ခြင်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့် ကလေးများအတွက် စိုးရိမ်စရာများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါသည်။
4. ကြမ်းတမ်းပြီး elastic: ထိခိုက်မှုဒဏ်ခံနိုင်၊ သက်တောင့်သက်သာရှိသောခြေထောက်ကိုခံစားရသည်။
5. မြင့်မားသောဘေးကင်းမှု၊ လျှပ်ကာ၊ မီးမွှန်ခြင်း၊ ချေးခံနိုင်ရည်၊ အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခုခံမှု၊ 5% acetic အက်ဆစ်။5% ဟိုက်ဒရိုကလိုရစ်အက်ဆစ်၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောမျက်နှာပြင်။မီးထဲက ငါးစက္ကန့်။နှစ် 20 ကျော် တာရှည် ဝန်ဆောင်မှု သက်တမ်း ရှိပြီး 6. အရောင်သစ်များ၊ ရွေးချယ်စရာ အရောင်မျိုးစုံ၊ လှပသော အရောင်များ၊ သဘာဝအတိုင်း အသက်ဝင်စေမည့် မည်သည့် အရောင်ပုံစံကိုမဆို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း၊ အရောင်၏ ပင်ကိုယ်စရိုက်ကို မီးမောင်းထိုးပြခြင်း၊ မြန်ဆန် အဆင်ပြေ တပ်ဆင်ခြင်း၊ အဆင်ပြေသော ဆောက်လုပ်ရေး ၊ လွှ၊ အစီအစဥ် ၊ သံမှို ၊ ပျစ်ဆေး အခမဲ့ ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် မြင့်မားသော automation၊ တည်ငြိမ်သောစက်ကိရိယာများ၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့် မြင့်မားသောထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုတို့ဖြင့် အသိဉာဏ်ရှိသောထိန်းချုပ်မှုကိုလက်ခံပါသည်။ပုံစံခွက်၏ မတူညီသော သတ်မှတ်ချက်များကို ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အမျိုးမျိုးသော သတ်မှတ်ချက်များ၊ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန်များ၊ အထူ သစ်သားပလပ်စတစ် အလှဆင်နံရံကပ်ဘုတ်များကို ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
"PVC wallboard" သည် ဝါးဖိုက်ဘာနှင့် အစေးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် မျက်နှာပြင်နည်းပညာအဖြစ် အိမ်၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့် အခြားနံရံအလှဆင်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးများသောပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။၎င်း၏ ဒီဇိုင်းနှင့် အရောင်သည် ရိုးရာနောက်ခံပုံများနှင့် နှိုင်းယှဉ်နိုင်ပြီး wallboard ၏ အားသာချက်များလည်း ရှိသည်။၎င်းသည် နံရံဆေးသုတ်ခြင်းနှင့် နောက်ခံပုံများအစား နံရံအလှဆင်ပစ္စည်း အမျိုးအစားသစ်ဖြစ်သည်။
PVC နံရံအကန့် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ PVC ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ထုတ်ကုန်များသည် အဆိပ်မရှိသော၊ အရသာမရှိသော၊ အစိုဓာတ်ခံနိုင်ရည်၊ ချေးခံနိုင်ရည်၊ ပေါ့ပါးသော အလေးချိန်၊ လှပသောအသွင်အပြင်၊ အရောင်အသွေး ကြွယ်ဝသော၊ သန့်ရှင်းပြီး ကွေးညွှတ်မှု ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ဆန့်ကျင်ခြင်း၊ ဆန့်နိုင်အား၊ ဖိသိပ်ခြင်း၊ မျက်ရည်ထွက်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ .
PVC wallboard ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ PVC wallboard ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် သစ်သားနှင့် ပလပ်စတစ်၏ အားသာချက်များကို အလေးပေးသည်။၎င်းသည် သဘာဝသစ်သားအသွင်အပြင်သာမက သဘာဝသစ်သား၏ ချို့ယွင်းချက်များကိုလည်း ကျော်လွှားနိုင်သည်။၎င်းတွင် သံချေးတက်ခြင်း၊ အစိုဓာတ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အင်းဆက်ပိုးမွှားဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ မြင့်မားသောအတိုင်းအတာ တည်ငြိမ်ခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ သန့်စင်သော ပလတ်စတစ်ထက် ပိုမိုမာကျောသည့် လက္ခဏာများရှိသည်။၎င်းသည် သစ်သားနှင့်ဆင်တူသော စီမံဆောင်ရွက်နိုင်မှုရှိပြီး ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပန်းချီဆွဲခြင်း၊ ချည်နှောင်ခြင်း စသည်တို့ကို လက်သည်းများ သို့မဟုတ် bolts များဖြင့် Fix ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။ကုန်ကျစရိတ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်၏ အားသာချက်နှစ်ခုဖြင့်၊ သစ်သားပလပ်စတစ်ဘုတ်ပစ္စည်းများသည် အပလီကေးရှင်းနယ်ပယ်ကို ဆက်လက်ချဲ့ထွင်ကာ အခြားရိုးရာပစ္စည်းများကို အစားထိုးရန် ပိုများလာပါသည်။
ယခင်- SPC ကြမ်းခင်းစာရွက် Extrusion Line
နောက်တစ်ခု: WPC Cabinet ပရိဘောဂဘုတ်လိုင်း
Spc Floor Sheet Extrusion Line
Spc Floor Tile Extrusion Line
PVC ဆောက်လုပ်ရေး Shuttering Board လိုင်း
PVC အခမဲ့ Foam ဘုတ်လိုင်း
PBM သဘာဝအမျှင်ဓာတ်ဖြည့် WPC ဘုတ်ထုတ်လုပ်ရေး ...
အမြွှာ conical extruder
NO.333 ANCHENG လမ်း ANTING ရှန်ဟိုင်း
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။